Mgbasa ozi ndụ nke Jiake Waya Mesh Machinery na-abịa na Machị, nabata ikiri
Anyị ga-enwe mgbasa ozi ndụ anọ nke igwe eji arụ ọrụ waya na Machị, anyị ga-akpọrọ gị ịmụtakwu banyere ụlọ ọrụ Jiake anyị, anyị ga-akpọrọ gị ịmụtakwu banyere igwe. Main waya ntupu ígwè nkọwa, gụnyere waya ntupu igwe, ọkụkọ onu waya ntupu igwe, ch ...
Dabere na otu akwụkwọ nke Ngalaba Azụmaahịa nke Hebei wepụtara na Disemba 8, 2020, ụlọ ọrụ anyị edepụtara aha maka mpaghara mpaghara mpaghara mpaghara mgbako e-commerce nke mpaghara mpaghara nyere site na Ngalaba Azụmaahịa nke Hebei. Enwere ụlọ ọrụ 24 ahọpụtara site na ...
Jiake waya ntupu ígwè suppliers na-anọnyere gị mgbe niile!
O ga abu nnukwu emume anyi n’ime ubochi iri- Ememme opupu. Igwe niile a gwụchara ga-anọgide na-ebu maka ndị ahịa anyị n'oge ezumike anyị, iji nyere ndị ahịa aka ị nweta igwe na mbụ. E nwekwara ozi ọma ọzọ. Obodo dị na Shijiazhuang dị nso na-emeghe ugbu a. Anyị nwere ike se ...
N'oge mgbochi ọrịa, anyị na-enye ọrụ 24 awa n'ụbọchị
N'agbanyeghị etu ọrịa ahụ si jie oke ma ọ bụ etu ọrịa a si jerue, anyị enweghị ike ịkwụsị nkwukọrịta dị n'etiti anyị na ndị ahịa anyị! Ọ bụ ezie na anyị na-ezu ike n'ụlọ n'ihi ọrịa ahụ, nke a agaghị emetụta ikike anyị. Mgbe ị na-arụ ọrụ n'ụlọ, ndị ọrụ ibe anyị ka na-ejere ndị ahịa ozi ...
Olee otú ịhọrọ a ozuzu ọkụkọ onu net igwe?
Anyị nwere igwe a na-ejikarị arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ozuzu, nke nwere ike dochie akụrụngwa waya waya, ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ ngịkọ ọkụkọ, oke bekee, ngị mink, ngịkọ ọkụkọ, nkịta ọhịa, ngị anụ ụlọ na ngwaahịa ndị ọzọ. Anyị ọkụkọ onu ntupu ịgbado ọkụ mach ...
Etu esi amalite ụlọ ọrụ ọhụụ na-eme ngwaahịa waya?
Fọdụ ndị ahịa jụrụ anyị: Abụ m ọhụụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ nsu, kedụ ihe ị na-atụ m aro ka m bido maka mbido? Maka onye na - azụ ahịa ọhụụ, ọ bụrụ na ịnweghị ego zuru oke, m na - atụ aro ka ị tụlee isoro ihe ndị a: 1. Igwe akụrụngwa zuru oke na-arụ ọrụ; Waya n'obosara: 1.4-4.0mm Gi waya / ịkwanyere waya ntupu oghere siz ...
Oyi Rolling ígwè mmanya ribbed igwe
Oyi Rolling ígwè mmanya ribbed igwe na-eji tụgharịa elu nke ígwè gburugburu Ogwe na-etolite abụọ ma ọ bụ atọ mpekere onwa n'akụkụ; Akụrụngwa: ala carbon nchara gburugburu mmanya ojiji: igwe a tumadi na-apụta dayameta nke 3-8mm ribbed Ogwe, ọ n'ọtụtụ ebe na na okporo ụzọ ọdụ ụgbọ elu, na-ewu ụlọ ọrụ; Thi ...
BRC ntupu mmepụta akara
BRC ntupu bụ ewu ewu na ihe ụlọ ọrụ; o nwere Fabric nwee ume ntupu, kpaliri welded ntupu, gusset welded ihuenyo ntupu na welded gabion ntupu… wdg; Dị ka waya ntupu ígwè rụpụta, anyị nwere ike inye gị zuru ezu ngwọta dị ka gị chọrọ; 1. waya usoro igwe; ...
Anti-ntigbaa ntupu igwe
Anti-ntigbaa ntupu bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu waya ntupu, na-akasị ji dị ka iche iche eriri nke okporo ụzọ, 1. Ọ dị mkpa ka ịgbanye na elu doo mgbe ụgbọala n'abalị na awara awara, nke ga-enwe a ntigbaa anya na ọkwọ ụgbọala anya ma metụta nchebe ịnya ụgbọ ala. The green eriri nwere ike igbochi li ...
Welded ntupu igwe loading
Taa, anyị mechara kwụọ ụgwọ otu igwe eji arụ ọrụ maka ndị ahịa Africa; 1. Nke a welded ntupu igwe nwere a dị iche iche ntupu ala akụkụ nke na ịgbado ọkụ igwe nwere ike na-arụ ọrụ mgbe ndị ọrụ na-apụ nke ikpeazụ okokụre ntupu mpịakọta si ala ngwaọrụ; 2. a welded ntupu igwe c ...
Waya ịgbatị & ịcha igwe
Waya ịgbatị & ịcha igwe bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu waya usoro ígwè; Anyị nwere dị iche iche iche iche nke ịgbatị & ịcha igwe nke nwere ike adabara dị iche iche waya dayameta; 1. 2-3.5mm Waya n'obosara: 2-3.5mm Cutting ogologo: Max. 2m tingcha ọsọ: 60-80 mita / min Kwesịrị ekwesị maka ...
Nnennen waya ịbịaru igwe loading
Ternyaahụ, anyị na-dị nnọọ okokụre loading nke otu set nke Kwụ Ọtọ waya ịbịaru igwe; Nnennen waya ịbịaru igwe, na-mepụtara maka ogologo ma ọ bụ deflection free ịbịaru nke waya na-enye mma drawability, anyị e mere dị ka ndị ahịa 'arịrịọ; Inlet waya n'obosara 5.5mm, tinyekwa waya dayameta bụ ...